प्रदेश २ को नामाकरणमा के चाहन्छन् त्यहाँका पत्रकारहरु ? | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » प्रदेश २ को नामाकरणमा के चाहन्छन् त्यहाँका पत्रकारहरु ?
प्रदेश २ को नामाकरणमा के चाहन्छन् त्यहाँका पत्रकारहरु ?
SAHARA TIMES Wednesday, January 9, 2019 1 No comments
प्रदेश २ का सरकारले प्रदेशको नामाकरणका लागि राय संकलन गर्ने काम शुरु गरेको छ । प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा अहिले संवाद समितिले विभिन्न कार्यक्रम गरी राय संकलन गरिरहेको छ । प्रदेश २ मा मिथिला प्रदेश, भोजपुरा प्रदेश, अवध प्रदेश, मध्य मधेश प्रदेश, मधेश प्रदेश लगायतका नामहरु बाहिर आएको छ । त्यसमा अहिले सबभन्दा बढी मध्य मधेश प्रदेश, मधेश प्रदेश र मिथिलिा प्रदेशको चर्चा बढी सुनिन्छ । तर अधिकाँश जनताको मत मधेश प्रदेशमा नै गइरहेको छ । यद्यपी प्रदेशको नामकरण गर्न त्यति सजिला देखिएको छैन । कुनै एउटा नाम राख्दा अर्को पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन हुने सम्भावना छ । उता बारा र पर्साबालाहरुले वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनि आन्दोलन गरिरहेको छ । यसैबीचमा प्रदेश २ को नामाकारण शुरु भएको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सक्रिय पत्रकारितामा लाग्नुभएका पत्रकारको विचारमा प्रदेश २ को नाम के हुनुपर्छ भनि हामीले उहाँहरुलाई सम्पर्क गरेका थियौं । प्रस्तुत छ उहाँहरुको विचार जस्ताका त्यस्तै ।
मधेशको भावना समेटेर प्रदेशको नामाकरण
–श्यामसुन्दर यादव, (सप्तरी) नेपाल टेलिभिजन,
प्रदेश २ को नामाकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि मिथिला मधेश राख्दा पनि हुन्छ, मध्य मधेश राख्दा पनि हुन्छ । तर, मधेश नाम जोडिएको हुनुपर्छ । मधेशमा पटक पटक आन्दोलन भयो । ती सबै आन्दोलन मधेशको नाममा भएको हो । आज त्यसलाई छाडेर अगाडि बढ्न सकिदैन । प्रदेशको नामाकरणसँग मधेशको भावना कही नकही जोडेकै हुनुपर्छ । मधेश आन्दोलन मधेशका लागि भएको थियो, मिथिला, भोजपुराका लागि भएको थिएन । मधेशमा तीन तीन पटक आन्दोलनमा सयजना भन्दा बढीले ज्यानको आहुती दिए, ती सबैले मधेशका लागि मात्र आहुती दिए । सायद मिथिला वा भोजपुरा वा अवधका लागि दिएका थिएन । अहिले आएर त्यसका लागि अतो थपेर हुँदैन । यद्यपी नाम जे राखेपनि प्रदेश २ को भाषा मैथिली नै हुनुपर्छ । प्रदेशको पहिचानसँग मिल्ने कुनै नाम राख्दा फरक पर्दैन तर भाषा प्रदेशको स्थानीय नै हुनुपर्छ । कहिलेकाही हिन्दीको कुराहरु पनि उठिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिँदै प्रदेशको भाषा हिन्दी बनाउने पनि चर्चा सुनिएको छ । यदि प्रदेश २ को भाषा हिन्दी भयो भने त्यो भन्दा घातक अरु केही हुनसक्दैन, बरु नेपाली नै ठिक थियो । पहिला मातृभाषाहरुलाई नेपाली भाषाले विभेद गरेको थियो । ती भाषाहरुको विकास हुन दिनएन अब प्रदेशमा पनि हिन्दी भाषाको महत्व दियो भने मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका लगायतका भाषाहरु नास भएर जान्छ । त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेशको नाम जेसुकै भएपनि भाषा मैथिली नै हुनुपर्छ किनभने प्रदेश २ मा सबभन्दा बढी बोल्ने भाषा नै मैथिली हो ।
मधेश प्रदेशमा कुनै विवाद हुँदैन
–मिथलेश यादव (सिरहा) नागरिक दैनिक
मधेश संघीयताको जननी हो । मधेश आन्दोलन नभएको भए संघीयता आउने थिएन । तीन–तीन पटक मधेश आन्दोलन भयो । सबैले त्यसलाई मधेश आन्दोलन भन्यो । तराईको आन्दोलन वा मिथिला आन्दोलन, भोजपुरा आन्दोलन भनेनन् । अहिले आएर कसैले मिथिला, भोजपुर भनेर हुँदैन । मधेश केका लागि आन्दोलन गरेको थियो त्यो कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै प्रदेशको नाम के राख्ने भनि विचार विमर्श गर्नु नै हुँदैन । मधेशका लागि यत्रो योगदान दिँदा दिँदै पनि प्रदेश २ को नाम के राख्ने भनि विचार विमर्शको आवश्यकता छैन । अहिले आएर मिथिला प्रदेश, भोजपुरा प्रदेश के के प्रदेश माग गर्नुको औचित्य छैन । प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भनि स्पष्ट छ । आन्दोलन भन्दा पहिले तराई मधेश भनिन्थ्यो । तर जब मधेश आन्दोलन भयो अनि तराई आफै हरायो र मधेश स्थापित भयो । जनजनको मनमा मधेश बसि सकेको छ भने अहिले यो वा त्यो नाममा नखरा गरेर हुँदैन । मधेशमा जहिले पनि आन्दोलन हुँदा सप्तरीदेखि पर्सासम्म आन्दोलन भयो । मधेशवादी दलले आन्दोलन गरेको कारण त्यसका दलका प्रतिनिधिहरुले मोरगं, सुनसरी, झापा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, कैलालीलगायतका जिल्लामा भएको थियो । आन्दोलनमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जनताले जति योगदान दिए त्यति अन्य जिल्लामा थिएन । यद्यपी ती जिल्लाको आन्दोलनलाई मैले नजरआन्दाज गरेको होइन । मैले आन्दोलनको महत्वलाई मात्र दर्साएको हुँ । यदि पार्सादेखि सप्तरीबाहेकका जिल्लामा मधेशका लागि आन्दोलन भएको थियो भने अहिले किन चुपचाप बसेका छन् । एक नम्बर प्रदेश बन्दा झापा, सुनसरी, मोरगं किन बोलेन । अथवा पाँच र सात नम्बर प्रदेश बन्दा कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही, कैलाली, कञ्चनपुर किन बोलेनन् । त्यसैले जहाँ मधेशका लागि आन्दोलन भयो त्यो प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश हुनुपर्छ । यदि प्रदेश २ को नाम मिथिला वा अन्य कुनै प्रदेश नाम राख्यो भने विवाद हुनसक्छ तर मधेश प्रदेश भयो भने कुने विवाद हुँदैन ।
सबैको भावनालाई मनन गरी नाम राख्नुपर्छ
–शैलेन्द्र महतो (धनुषा) उज्योलो एफएम
यहाँ मैथिली भाषा मात्र भएको भए हुन्थ्यो तर यहाँ भोजपुरी, अवधी, बज्जिका भाषा पनि छन् । त्यसमा मधेशको भावना पनि छ । त्यसलै सबैको भावनालाई समेट्ने गरि प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ । एउटा राख्दा अर्कोको चित्त दुख्छ भने अर्को राख्दा अर्काको चित्त दुख्छ त्यसैले सबैको चित्त बुझ्ने गरी, सबैको भावनालाई ख्याल गरी प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा मिथिला भोजपुरा मधेश प्रदेश नाम राख्दा अति उत्तम हुन्छ । अलि लामै भएपनि यसमा सबैको भावना समेटिएको छ । यहाँ मध्य मधेशका कुरा पनि जोडतोडले उठेको छ । यसमा मधेशवादी दलको समर्थन भएपनि काँग्रेस र नेकपाको समर्थन छैन । मध्य मधेश वा मधेश प्रदेशलाई काँग्रेस र नेकपाले विरोध गर्नेछ । बारादेखि सप्तरीसम्म मिथिला प्रदेशको चर्चा बढी देखिन्छ । त्यसमा रौतहटको आधा भाग मिथिला प्रदेशको पक्षमा देखिएको छैन । बारा र पर्सा पनि मिथिला प्रदेशको पक्षमा देखिएको छैन । बारा र पार्साले भोजपुरा प्रदेश मागिरहेको छ । तर मधेशवादी दलले त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । सिरहा र सप्तरीतिर मध्य मधेश वा मधेश प्रदेशको पक्षमा पनि मतहरु आइरहेका छन् । मिथिला प्रदेशको नारा धनुषा वरिपरीमा बढी लागि रहेको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा एउटा कुनै राख्दा त्यसको विरोध हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ । सोच विचार गरेर सबैको भावनासँग मिल्ने गरी एउटा नाम राख्दा कुनै विवाद हुँदैन जस्तो लाग्छ । किनभने मधेशको आन्दोलनमा सबै जात धर्म, समुदायको संलग्नता थियो । मिथिला, भोजपुराको नाममा आन्दोलन नभएपनि त्यसमा उहाँहरुको पनि संलग्नता अवश्य थियो । त्यसले सबैको भावनालाई मनन गरेर प्रदेशको नाम राख्दा राम्रो हुन्छ । तर मधेशलाई चाहि छाड्नु हुँदैन ।
समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी उपाय खोज्नुपर्छ
–महेश दास (महोत्तरी) नागरिक दैनिक
भुगोल, भाषा, बसोवास, भाषा, सँस्कृति र पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । मधेशी जनताले पहिचानका लागि आन्दोलन गरेको थियो । त्यसैले त्यो पहिचान देखिने गरि प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ । अहिले मिथिला प्रदेश कि मधेश प्रदेश त्यसमा संघर्ष भइरहेको छ । एकथरीले मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भनि रहेको छ भने अर्कोथरीले मिथिला प्रदेश हुनुपर्छ भनि रहेको छ । कतै कतै भोजपुरा र अवधको कुरा पनि आइरहेको छ । यसरी आआफ्नो दावी गरिरह्यो भने प्रदेशको नामाकरण कहिले हुनसक्दैन । त्यसैले यसबाहेकका नाम पनि हुनसक्छ त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । मिथिला प्रदेश र मधेश प्रदेश छाडेर जनक वा जानकी प्रदेश अथवा विदेह प्रदेश पनि राख्न सकिन्छ । वा यो आठवटाको भावनालाई समेट्ने अर्को कुनै नाम खोज्न सकिन्छ । कुनै ठूला व्यक्ति विशेषको नामबाट पनि दिन सकिन्छ । सलहेश पनि एउटा हुनसक्छ । यदि विवाद छ भने मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मधेश प्रदेश राखेर हुँदैन किनभने आठवटा जिल्ला मात्र मधेश होइन । मधेशका आठवटा जिल्ला रहेका छन् । ती जिल्लाका लागि पनि स्पेश राखि राख्नुपर्छ । यदि यही आठवटा जिल्लालाई मधेश प्रदेश नामकरण गर्यो भने मधेश यतिमै सिमित हुन्छ । बरु आन्दोलन गर्नका लागि बाँकी रहेका जिल्लालाई पनि प्रदेश २ मा मिलाउने एउटा बहाना हुन्छ । यदि यी आठवटा जिल्लालाई मधेश नामाकरण गर्यो भने अरु जिल्लाका लागि के नामबाट आन्दोलन गर्न सकिन्छ त्यसैले मधेश नामलाई थाती राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ । यद्यपी समिति वर्ग मिथिला प्रदेशको माग गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशको मागको सँख्या बढी देखिन्छ तर विवादको ठाउँ राखि राख्नु हुँदैन । आज एउटा नाम राखेपछि भोली अर्को नामका लागि आन्दोलन भयो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर काम गर्नु उचित हुन्छ ।
मधेश प्रदेशबाहेक सोच्नै सकिदैन
–मनोज यादव (सर्लाही) स्वर्णिम एमफएम
प्रदेश २ को नामकारणमा धेरै टाउको दुखाउने कुरा नै होइन । मधेश प्रदेश नाम राख्ने स्पष्ट छ । मधेश प्रदेशबाहेक अरु कुनै नाम राख्यो भने मधेशी जनताको साथमा ठूलो बेइमानी हुनेछ । त्यसैले दायाँ बायाँ नसोची सिधै मधेश प्रदेश राख्दा उत्तम । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै मधेश बनाउनका लागि आन्दोलन भएको थियो तर विभिन्न षड्यन्त्र गरेर मधेशलाई टुक्रा टुक्रा पार्यो । अब अहिले पनि मधेशको पहिचान कायम राख्न मधेश प्रदेश राखिएन भने मधेश शब्द हराउनेछ । मधेशवादी दलहरुले त्यतिकै पनि आआफ्नो दलबाट मधेश शब्द झिकेर हटाइसकेका छन् । अब हुँदा हुँदै दुई नम्बर प्रदेशका नाम पनि मधेश प्रदेश राख्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यदि प्रदेश २ को नाम मधेश राखिएन भने मधेश नामको चिज हराउने पक्का छ । त्यसैले आँखा चिम्लेर प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश राख्दा बेस । बरु मधेशका अरु जिल्लालाई पनि यसमा मिलाउनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ तर मधेशका अरु जिल्लाको के हुन्छ सोचेर मधेश नै छाड्यो भने ठूलो बेइमानी हुन्छ । मधेश आन्दोलनको भावना र मर्म अनुसार पनि प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश उपयुक्त हुन्छ । नेपाल सरकारसँग भएको आठ बुँदे सम्झौतामा पनि मधेश प्रदेश हुने कुरा उल्लेख छ । त्यसैले त्यो स्प्रीटलाई कायम गर्नका लागि पनि मधेश प्रदेश हुनु आवश्यक छ । मिथिला, भोजपुरा, मध्य मधेश लगायतका नाम भावनात्मक रुपमा आएको छ । आआफ्नो जाती, समुदाय र विचारमा समर्पित भएर यी नामहरु बाहिर ल्याएका छन् जो पुरै मधेशलाई समेट्न सक्दैन । मिथिला प्रदेशको नाम जातीय रुपमा आएको हो । जनकपुरका केही व्यक्तिले उठाएको मुद्दा हो मिथिला प्रदेश । पुरै मधेशमा यसको चर्चा छैन । जनकपुर वरिपरी यसको चर्चा विशेष रुपमा भेटिन्छ । मध्य मधेशको नाम आठवटा जिल्लामा मधेश समिति भएका कारणले ल्याएको हो । मधेश झापादेखि कञ्चनपुरसम्म रहेको छ । त्यही भएर मध्य प्रदेश राखेको हुनुपर्छ । मध्य मधेशमा पनि आपत्ति छैन तर मधेश प्रदेश राख्दा सबै भन्दा राम्रो । अहिले सोच्दा पछि पश्चाताप बाहेक अरु केही बाँकी रहनेछैन ।
भोजपुरा र मिथिलामा कुरा नमिले मधेश प्रदेश
–प्रेमचन्द्र झा (रौतहट) क्रान्तिद्वारा
भोजपुरा र मिथिला प्रदेशमा विवाद देखिएको छ । रौतहट, बारा र पर्सा भोजपुरा प्रदेशको पक्षमा देखिएको छ भने सर्लाहीदेखि पूर्व मिथिला प्रदेशको पक्षमा रहेको देखिन्छ । मिथिला प्रदेश भयो भने यी तीन जिल्लामा मान्दैन । भोजपुर भयो भने उतको पाँच जिल्लाले मान्दैन । त्यसलै यी दुईटालाई हटाएर मध्य मधेश प्रदेश अथवा मधेश प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुन्छ । मध्य मधेश वा मधेश प्रदेशमा त्यति विवाद होला जस्तो लाग्दैन किनभने यसमा मधेश आन्दोलनको भावना जोडिएको छ । मधेशको पहिचान र अधिकारका लागि मधेश आन्दोलन भएको थियो । र, आज त्यसको नामाकारणको कुरा आउँदा विभिन्न नामहरु बाहिर आएको छ । त्यसले समस्या निम्त्याएको छ । यदि मिथिला र भोजपुरा लिएर कुरा मिलेन भने सबैलाई चित्त बुझ्ने नाम मधेश प्रदेश राख्दा राम्रो हुने देखिन्छ । किनभने मधेशमा मधेशी जनताको रगत बगेको छ । मधेशका लागि यत्रो आन्दोलन भयो । मधेशको नाममा बलिदानी दिएको हो त्यसलै मधेशलाई कुनै पनि हालतमा छाड्नु हुँदैन । तर, भोजपुरा र मिथिला प्रदेशको भावनालाई कही कतै एडजस्ट गर्नुपर्छ किनभने भोजपुरा र मिथिलाको पनि आफ्नै इतिहास छ । इतिहासलाई मर्नु दिनुहुँदैन । प्रदेशको नाम राखेर भोजपुरा र मिथिलालाई कसरी सम्मान दिनसकिन्छ त्यसको बारेमा पनि सोच्नै पर्छ किनभने जनयुद्धकालमा मिथिला र भोजपुरको नाम राखिएको थियो । त्यसको गरिमालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
मधेश प्रदेश नै उपयुक्त
–रमेश सर्राफ (बारा) पत्रकार
अहिले प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश २ को नामाकरणको विषयमा राय संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसमा मधेश प्रदेशको मत अधिकाँश ठाउँबाट आइरहेका छन् । मधेश प्रदेश हुनुपर्छ आठवटै जिल्लाका मधेशी जनताको धारणा रहेको छ किनभने ती जनताहरुले मधेशका लागि आफ्नो रगत बगाएको हो । मधेश आन्दोलनकै समयमा मधेश सरकार लेखिसकेको थियो के अब त्यसलाई मेटाउन सक्छ त । सरकारी कार्यालयहरुमा त्यतिबेला नै मधेश सरकार लेखिएको थियो तर अब त्यसलाई मेटाएर अरु प्रदेश लेख्ने आँट गर्ला त । त्यसले मधेश प्रदेशको नाम नै उपयुक्त हो । बारा र पर्सामा राजधानीको विषयलाई लिएर केही विवाद छ तर प्रदेशको नामकारणको विषयमा कुनै विवाद देखिएको छैन । मधेश प्रदेशले पुरै मधेशलाई जोड्ने काम गर्नेछ । मधेश आन्दोलनको भावना र मर्मले पनि प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भनिरहेको छ । मधेशी जनताले मधेश सरकारका लागि आन्दोलन गरेको थियो । आज मधेशबाहेक अरु नाम राख्यो भने ती सपुतको आत्माले शान्ति प्राप्त गर्दैन जसले मधेशका लागि आफ्नो ज्यानको कुर्वानी दिनुभएको थियो । समग्र मधेश एक प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै मधेशका जनताले आन्दोलन गरेको थिया तर विभिन्न षड्यन्त्रका कारण त्यो प्राप्त हुनसकेन तर हामीसँग जति छ त्यसको नाम मधेश प्रदेश राखौ बाँकीका लडौ भनि मेरो धारणा छ । प्रदेश २ मा मधेशका अरु जिल्ला मिलाउनका लागि आन्दोलन गरौं तर मधेश प्रदेशलाई नछाडौ । अहिलेसम्म राज्य पुनः संरचनाको टुगों लागेको छैन । यदि भोली गएर सिमांकनका विषयमा कुरा मिलेन र मधेशका अन्य जिल्ला मिलाउने आवश्यकता भयो भने त्यतिबेला यो काम लाग्छ । यदि अहिले नै मधेश नाम राखिएन भने पछि फेरि नाम राख्न सजिलो हुनेछैन । त्यसैले प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश नै राख्नुपर्छ भनि चारैतिरबाट अवाज आइरहेको छ । आन्दोलनको समयमा मधेशबाहेक अरु कुनै कुरा सुनिएकै थिएन । जय मधेशको नारा चारैतिर गुन्जिएको थियो । नमिथिलाको नाम कहिले सुनियो नकहिले भोजपुराको नारा लागेको सुनियो । अहिले नारा लगाएर केही हुँदैन । मधेशको नाम स्थापित भइसकेको छ यसलाई कसैले हटाएर हटदैन । मधेश पनि कही मध्य, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हुन्छ । एउटा मधेश थियो र एउटै रहन्छ मधेशमा अरु केही जोड्नु हुँदैन । सिधै मधेश प्रदेश राख्नुपर्छ ।
मधेश प्रदेश र राजधानी वीरगञ्ज राख्नुपर्छ
–कन्हैयालाल केसरी (पर्सा) गोरखापत्र दैनिक
वीरगञ्जलाई राजधानी बनाएर प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश राख्नुपर्छ । मधेश आन्दोलनको माग नै यही थियो । मधेश आन्दोलनमा वीरगञ्जले थुप्रै योगदान दिएको छ । त्यसका आधारमा त्यसलाई राजधानी बनाउनुपर्छ । तेस्रो मधेश आन्दोलनको समय मधेशवादी दलका नेताहरु राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रुपमा बारम्बार भन्नुभएको थियो कि वीरगञ्जलाई मधेशको राजधानी बनाउनेछौ । वीरगञ्ज मधेशको राजधानी बन्दैछ भनेर नै यहाँका जनता ज्यान फ्यालेर आन्दोलनमा लागेका थिए तर अहिले आएर बेइमानी भइरहेको छ । मधेश प्रदेशबाहेक अरु केही सोच्नै हुँदैन । मधेश प्रदेशका लागि नै यत्रो आन्दोलन भएको थियो भने अहिले आएर त्यसलाई छाड्नु बेइमानी हुन्छ । रगतको मूल्य चुकाउनकाा लागि भएपनि प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश हुनुपर्छ । मधेशी जनताको भावनाको मुरा पनि हो । मधेशको भावना मधेश आन्दोनलकै समयमा व्यक्त भइसकेको थियो । त्यसैले जनताका भावनासँग खेलवाड गर्नुहुँदैन । हुन त समग्र मधेश एक प्रदेशका लागि आन्दोलन भएको थियो तर त्यो हाललाई त्यो प्राप्त गर्न नसकिए पनि अहिले भएजतिलाई मधेश प्रदेशको नामकरण गरौं पछि प्राप्त भएपछि त्यसलाई पनि यसैमा मिसाउने काम गरिनेछ तर अहिले प्रदेश २ लाई मधेश प्रदेश नै राख्दा राम्रो । नत्र अहिले मधेश प्रदेश राखिएन भने पछि यो पनि प्राप्त गर्ने ठाउँ रहँदैन । त्यतिबेला पश्चातापबाहेक अरु केही प्राप्त हुँदैन । अहिले प्रदेश २ को नाम राख्ने काम यहाँको जनताको हातमा छ । यहाँको नेताको हातमा छ । यसमा संघीय सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन । यस अवस्थामा मधेश नामाकरण गर्न सकिएन भने लाजमर्दा कुरा हुन्छ । सहिदले पनि गिज्याउनेछ । आफ्नो हातले गर्न सकिने काम पनि गर्न सकिएन भने संघीय सरकारले यो गर्न दिएन, त्यो गर्न दिएन भनि आरोप लगाउने अधिकार पनि दुई नम्बर प्रदेशले गुमाउनेछ ।
Birendra Mahato January 10, 2019 at 8:00 AM
संघीयता भनेको राजनीतिक बिभाजन हैन यो संस्कृति र पहिचान खुलाउने संरचना हो तेसैले प्रदेश २ को नाम मधेस राखिनु हुदैन यसको नाम संस्कृति र पहिचान खुलाउने हुनुपर्छ यसको नाम १. मिथिला २.मिथिला भोजपुरा ३.जनक जानकी इत्यादि हुनुपर्छ